सरुवा र बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रहरीमा धमाधम जागिर छोड्दै विदेश जान थाले ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/सरुवा र बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रहरीमा धमाधम जागिर छोड्दै विदेश जान थाले !
सुर्खेत : कक्षा १२ उत्तीर्ण भएपछि पञ्चपुरी–६ सुर्खेतका मानसिंह विसी नेपाल प्रहरीमा भर्ना भए। मुस्किलले दुई वर्षसम्म उनले जागिरमा बिताए। तर बल्लतल्ल खाएको प्रहरीको जागिर बीचमै छाडेर विसी विदेश हानिए। हाल उनी रोजगारीको क्रममै कोरियामा छन्। कामअनुसार सुविधा नभएपछि परिवारको खर्च जुटाउन जागिर छाडेर विदेश उडेको उनका आफन्तले जनाए।
वीरेन्द्रनगर–१२ का नविन सारुले पनि ६ वर्ष नबित्दै प्रहरीको जागिर छाडिदिए। परिवारको खर्च जुटाउन भन्दै प्रहरीमा भर्ना भएका उनी यतिबेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा छन्। उनले जागिर छाडेको सात महिना मात्र भयो। प्रहरीको जागिरले घरखर्च नचलेपछि बीचमै जागिर छाडेर विदेश जान लागेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘प्रहरीमा ६ वर्षसम्म त दुःख गरेँ, तर दुःख अनुसार सुविधा बढेन। २४ घण्टे जागिरले घरखर्च चलाउनै मुस्किल भयो, अब विदेश गएर कमाउँछु।’
दैलेखको ठाँटिकाँध घर भएका राकेश नेपालीको पेन्सन निस्कन पाँच वर्षमात्र बाँकी थियो। तर पनि उनले एक वर्षअघि प्रहरीको जागिरबाट राजीनामा दिए। हाल उनी वीरेन्द्रनगरस्थित एरिचोकमा फेन्सी पसल गरेर बसिरहेका छन्। ‘सुरुमा जागिरका लागि धेरै दौडिएँ, भाग्यले नै भनौं प्रहरीमा भर्ती पनि भएँ। तर त्यहाँभित्र हाकिमलाई रिझाउन नसक्दा बढुवा र सरुवा कहिल्यै भएन, जवानकै तलबले मात्र खर्च धान्न धौ भएपछि बीचमै जागिर छाडेर व्यापारमा लागेँ।’
सकी नसकी प्रहरीमा जागिर खाएर बीचमै जागिर छाड्नेहरूमध्येमाथि उल्लेखित व्यक्तिहरू केवल प्रतिनिधि मात्र हुन्। पछिल्लो सयम सेवा, सुविधा, सरुवा र बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रहरीमा धमाधम जागिर छाड्नेको संख्या बढ्दो छ। कर्णाली प्रदेशमा मात्र एक वर्षको अवधिमा डेढ सयभन्दा बढी प्रहरीले बीचमै जागिर छाड्ने गरेको पाइएको छ। स्थायी जागिर र पेन्सनको सुविधा भए पनि प्रहरीको जागिरबाट राजीनामा दिनेहरूको संख्या बढ्दो छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा ललितबहादुर बुढाले यो समाचार लेखेका छन् ।’
चीनले आफ्ना नागरिकलाई कोरोनाको खोप दिन सुरु गरेको रहस्य पर्दाफास